विदेशबाट नेपाली श्रमिकको उद्धार : हवाई टिकटमा सरकारको भूमिका खसी व्यापारीजस्तो ! - Himali Patrika
विदेशबाट नेपाली श्रमिकको उद्धार : हवाई टिकटमा सरकारको भूमिका खसी व्यापारीजस्तो !
हिमाली पत्रिका ३२ जेष्ठ २०७७, 4:52 pm
३२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चार दिनअघि विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गर्ने तालिका र भाडादरको सूची निकाल्यो, यो भाडादर देख्नासाथै विदेशमा अलपत्र नेपालीहरू अत्तालिए । त्यही भाडादर तिर्ने हो भने उनीहरूको उद्धार होइन, थप अभरमा पार्ने देखियो ।
सरकारले तोकेको भाडादर ओमानस्थित नेपाली दूताबासद्वारा खारेज ! सस्तो टिकटमा साढे ३ सय नेपाली फर्कंदै
‘यहाँ साधारण कामदारलाई एक हजार दिनार कमाउन मुस्किल छ, ६ हजार दिनार तिरेर फर्किँदा त एक वर्षको कमाइ नै सकिन्छ,’ उनी भन्छन्,’सरकारमा आमजनताका प्रतिनिधि छन् कि विशुद्ध अर्वपति व्यापारीका ?’